Holiday Kushambadzira Matipi eRetail uye Ecommerce | Martech Zone
Chitatu, November 11, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Hazvishamise kuti 78% yevatengi vachange vachitsvaga kwavo kwavanotevera kutenga online, asi chii chiri kushamisika kuti vangani vatengesi uye ecommerce makambani ari kusiya kwavo online kuvepo kunze kweiyo equation. Chimwe chezvinhu izvo zvisipo ndiPinterest - iyo kutungamirira pasocial network yezvipo kurudziro.
Mumakore gumi nemashanu apfuura, 75% yekukura kwekutengesa kwave kuburikidza nekutengesa kwepamhepo. Nepo ruzhinji rwekutengesa ruchiri kuitika muzvitina & mumatope zvitoro, hapana mubvunzo kuti tekinoroji iri kukanganisa sei kutengesa kukura. Kubva pakubvumidzwa kwetekinoroji mu-chitoro kuenda online, kuroora izvo zviviri zviitiko zvisina musono ndiko kiyi pakutyaira kukura kwekutengesa.
Lauren Jung we Shefu yakapa aya matatu makiyi ekuwedzera kutengesa kushambadzira kwezororo:
Kutanga mangwanani - Vanhu vari kutenga kare kupfuura nakare kose. Gore rapera, akawanda mabhenji akagamuchira traffic shoma uye kutengesa nekuti ivo vaingotarisa pazororo rakakosha rekarenda (Nhema Chishanu, Cyber ​​Muvhuro, nezvimwewo), zvichipesana nekutanga kutanga senge iwo mabhendi aifunga kumberi kwepakeji.
Usaregeredza digital - Zvitoro zvizhinji zvezvidhinha nedhaka zvinofunga kuti zvakanaka kuenda nekuti vanhu vanozongozviwana, asi chokwadi chinofanira kutaurwa… vatengi vanoita tsvagiridzo yavo online vasati vaenda kunotenga. Kunyangwe iwe uri chidhinha uye dhaka kana online shopu, kuwanikwa online kwakakosha.
Vanokurudzira - ndiyo wave wenguva yemberi, uye nzira yekuenda kana uchironga kushambadzira kwako kwezororo. Hapana munhu anotarisa pamabhana kushambadza zvekare. Uye zvinotonyanya kukosha… mazana maviri eMMMMillion vanhu vari kushandisa block block. Saka mari yako yawakawana zvakaoma haatombooni kana mwenje wezuva.
Tags: kudhinda kwedhijitaridigital influencerzororokushambadzira pazororoinodzokatengesa zvimwetengesa zvimwe zvinhupasherufu